PressReader - Ilanga: 2017-09-04 - UPHUMELA OBALA UMATHOHO
UPHUMELA OBALA UMATHOHO
Ukhala ngokulimala kwangesizini edlule
Ilanga - 2017-09-04 - Front Page - SENZO SOKHELA
U-ERIC “Tower” Mathoho odlala emuva kwiKaizer Chiefs naseqenjini lesizwe lakuleli iBafana Bafana uphumela obala ngesizathu esimenza ukuthi aboze. IBafana izodudulana neCape Verde Island emlenzeni wesibili wokuhlungela iNdebe yoMhlaba kusasa ngoLwesibili ngo19h00 eMoses Mabhida Stadium, eThekwini. Emlenzeni wokuqala obungoLwesihlanu ebusuku kulo leliya lizwe iBafana iphoxile iguqiswa ngo-2-1 yileli qembu. UMathoho uthole ikhadi elibomvu kulo mdlalo ekhahlela umdlali weCape Verde endaweni engayona ingozi, singekho nesidingo sokwenza lokho. Ukwenza lokhu nje, iBafana ibizama ukukhava kwazise ibihlulwa ngawo u-2-1 kwavele kwanzima kakhulu kunakuqala. Ngaphandle nje kokukhishwa ngekhadi elibomvu, uMathoho ubevele elikhongco elibuthaka kangangoba namagoli angenele iBafana umunwe uqondiswe kuyena. Abathandi bebhola bakhwele badilika kuMathoho ezinkundleni zokuxhumana besho yonke into abayithandayo kuyena ngenxa yesenzo sakhe. Abanye bebethi besingekho isidingo sokuthi awuqale lo mdlalo kwazise iChiefs idliwa kangaka nje kungenxa yokuboza kwakhe. Omunye usole ukuthi lo mdlali sekuyavela ukuthi wephula iminyaka yingakho kungasagijimeki amadolo awasavumi. UMathoho ulivumile iphutha lakhe wabe eseveza isizathu athi yisona esenza ehlelwe yifomu. “Uma ubheka isizini eyedlule ngike ngahlushwa kakhulu wukulimala okuyikhona okuphazamise ifomu yami.
"Kunzima ukuthi ukade ulimele bese uqhamuka usuzodlala ngendlela efanayo nangesikhathi ungakalimali.
"Kodwa-ke ngiyazama ukubuyisa ifomu yami zingaze zonakale kakhulu izinto.
"Ngiyalivuma iphutha engilenze kulo mdlalo weCape Verde, besingekho isidingo sokukhahlela umdlali ngiyaxolisa esizweni.
"Angiyena umuntu wamakhadi abomvu, bengiqala nje ukuthola ikhadi elibomvu sidlala neSuperSport United njengoba sengizothola leli khadi,” kusho uMathoho.
Njengoba uMathoho ezobe engekho nje kulo mdlalo waseThekwini kuvela ukuthi indawo yakhe ingase ithathwe nguMorgan Gould abalandeli abathi bekuvele kufanele kwasekuqaleni kuqale yena endaweni kaMathoho.
Angiyena umuntu wamakhadi abomvu, bengiqala nje ukuthola ikhadi...
NGUMDLALI wasemuva weKaizer Chiefs neBafana Bafana u-Eric Mathoho ovumayo ukuthi izinto kazimhambeli neze kahle ebholeni njengoba ethole amakhadi abomvu elandelana koweligi kubhekene iChiefs neSuperSport United kanjalo nakowokuhlungela iNdebe yoMhlaba...